ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 31.4 ဆမိတ်ခုံ မင်းက နောက်ဆုံးမှ ရှု
MIT မှာ တက်နေတုံးက မုံရွာသား မိုးဟိန်း ရောဂါဖောက်လို့ ရွှေဘို သွားရသေးတယ်..။
မိုးဟိန်းရဲ့ ကောင်မလေး က အဲဒီတုံးက ရွှေဘိုကောလိပ်မှာ ဒုတိယနှစ် တက်နေတယ်..။
သူကြီးကို အကူအညီတောင်းရတာပေါ့..။ သူက ရွှေဘိုသားဆိုတော့.. မိုးဟိန်းဖွန်ကိစ္စ .. သူကြီးအိမ်မှာ တည်းရင်း ကြောင် မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ကျွန်တော်ရယ် မိုးဟိန်းရယ် ဥက္ကာ ဆိုတဲ့ ဖယ်ခုံသားရယ်.. ရွှေဘို ချီတက်ခဲ့ကြတယ်..။
သူကြီး က လိုက်ပို့ရှာတယ်..။ သူငယ်ချင်းများရဲ့အနွံတာလည်း တကယ်ခံတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်ဖြတ်တော့ ထိုင်ခုံက သုံးခုံပဲ ကျန်တော့တာ.. တလမ်းလုံး သူကြီးက နောက်ကတွယ်စီးရင်း လိုက်လာတယ်..။
ဘယ်လောက် နေရာချင်း လဲ မယ် ပြောပြော သူလက်မခံဘူး..။ ကိုယ်က အိမ်ရှင်.. သူငယ်ချင်းတို့ စီးကျပါ လို့ ပြောပြီး ဇွတ်ငြင်းတယ်..။
မန္တလေးက အစောကြီး ထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ ရွှေဘိုကို နေ့လည်လောက် ရောက်သွားတယ်..။ သူကြီး က သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့အဖေနဲ့အမေကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်..။
“ ဟောဒီ မိုးဟိန်းဆိုတဲ့ကောင် ဖွန်ကြောင်ချင်လို့ ဒီကောင်တွေ လိုက်လာခဲ့တာ ” လုိ့တော့ ဘယ်မိတ်ဆက်ပေးမလဲ..။ သူငယ်ချင်းတွေက .. ရွှေဘို တခါမှ မရောက်ဖူးလို့ လိုက်လည်ကြတာ ပေါ့..။
ဒါပေမယ့် သူကြီးက သူ့အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဆောက်နဲ့ထွင်းတယ်..။
သူတို့အိမ် ခါးပန်း ချိတ်ထားတဲ့ အမဲခြောက် ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး “ သူငယ်ချင်းတို့ ညနေကျရင် အဲဒီအမဲခြောက် ချက်ကျွေးမယ် မနက်စာအနေနဲ့ကတော့ အနံ့ရှုကြ.. ဆမိတ်ခုံက နောက်ဆုံးမှ ရှု.. မင်းက နှာခေါင်း ကြီး တယ် ” လို့ ပြောတယ်..။
ကျွန်တော်က ကသည်းမျိုး ဆိုတော့ နှာတံ ပေါ်တာကို သူကြီးက ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ် တာ.. ဟားဟား..။ တကယ်တမ်းက အဲဒီလောက် မကြီးပါဘူး..။ လူရွှင်တော် ကျော်ထူး လောက်ပါပဲ..။ ဟားဟား..။
နှာခေါင်းကြီးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဒမ်ကလည်း မကြာခဏ ပြောတယ်..။ သားနဲ့သမီးက မီးမီးနဲ့တူလို့ သူတို့ နှာတံလေးတွေက လှတာ ဆိုပဲ..။ ကိုကြီး နဲ့ တူရင် ကလေးတွေ ရုပ်ဆိုး မယ်တဲ့..။
ကျွန်တော်လည်း ပြန်ပြောရတယ်..။ ဟုတ်တယ် ကိုကြီးတို့က နှာခေါင်းကြီးတော့ အသက်ရှုရတာ ချောင်ချောင်ချိချိ ရှိတာပေါ့..။ မီးမီးတို့လို ကိုယ့်နှာခေါင်းနဲ့ကိုယ် လေကို မ၀တ၀ ရှုနေရတာမျိုးကတော့ သနားစရာပဲ လို့..။
ဒီလိုပဲ မနိုင်နိုင်အောင် ပြောရတာပဲ..။
နောက်ရှိသေးတယ်..။ ကျွန်တော့်အသားအရေ ကို မဒမ်က ကိုင်ကြည့်ပြီး ကိုကြီးတို့ အသားအရေက ပျော့တိပျော့တွဲ နဲ့ ကြီးရင် ရုပ်ကျ မြန်မယ်တဲ့..။ မီးမီးတို့လို အသားအရေကမှ တင်းတင်းရင်းရင်း နဲ့ ကောင်းတာ တဲ့..။
သူပြောတာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်မှာပါပဲ..။ မဒမ်က တော်တော့်ကို အရွယ်တင်တယ်..။
ဒါပေမယ့် သူအဲဒီလို ပြောတိုင်း ကျွန်တော်ကတော့ “ ဟုတ်တယ်.. ကိုကြီးတို့က ရုပ်ပျော့တယ်.. မီးမီးတို့က ရုပ်မာ တယ် ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်..။
“ကိုကြီး နဲ့ တူရင် ကလေးတွေ ရုပ်ဆိုး မယ်တဲ့”
မီးမီးကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်.. ခွိ ခွိ.. (blog တွေလည်ဖတ်ပြီးကတည်းက အဲလို ရီတတ်သွားပါသည်)
ha ha! Agree! Only when you write, I go and see your family photo espeically nose... hee hee hee...
လိုက်လည်းလိုက်တဲ့လင်မယား ဘဲဗျာ